Daawo: Wasiir macluumaad ka bixiyay gorgortanka ay DF ka gashay heshiiska kaluumeysiga - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Wasiir macluumaad ka bixiyay gorgortanka ay DF ka gashay heshiiska kaluumeysiga
Daawo: Wasiir macluumaad ka bixiyay gorgortanka ay DF ka gashay heshiiska kaluumeysiga
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka badda dowladda Federaalka Soomaaliya C/raxman Maxamed Cabdi Xaashi oo wareysi siinaayay Tv-ga Universal ayaa si qoto dheer uga hadlay Heshiiska Kheyraadka oo ay isla meel dhigeen Madaxda Qaranka iyo kuwa maamul Goboleedyada ka jira dalka.
Wasiirka waxa uu sheegay in Heshiiska Kheyraadka ee iminka lagu gaaray magaalada Muqdisho uu ahaa mid soo jiitamaayay muddo badan, balse iminka la gaaray dantii laga lahaa Heshiiska.
Wasiirka waxa uu sheegay in dowlada Federaalka ay dhibaatooyin badan kasoo martay sida maamul Goboleedyada looga dhaadhicin lahaa ahmiyada Heshiiska awood qeybsiga DF iyo Maamulada ee kalluumeysiga.
Waxa uu tilmaamay inaanu jirin sharci maanacaaya in dowlada Somalia looga danbeeyo wixii sharci ah, balse uu dareemaayo in loo baahan yahay in la qanciyo maamulada si wax loo wada qeybsado.
Waxa uu Wasiirku sheegay in maamul Goboleedyada ay dhinacyo badan wax ka tuseen maadaama Kheyraadka iminkaba ay gurtaan Maraakiibta iyo Doonyahay shisheeye.
Heshiiska ayuu tilmaamay inuu yahay heshiis ku meel gaar ah oo ay ka gaaren qeybsiga dakhliga ka soo xarooda rukhsad bixinta kalluumeysiga.
Sidoo kale, waxa uu Wareysigiisa ku cadeeyay in dowlada Somalia looga danbeyn doono bixinta rukhsad kaluumeysiga, isla markaana maamulada ay noqon doonaan kuwo arrimaha Kaluumeysiga kala kaashta dowlada.
HOOS KA DAAWO MUUQAALKA WAREYSIGA WASIIRKA